Dagaal aad u ba'an ayaa ka dhacaya deegaanka Raaso, gaar ahaan degmada Salaxaad ee Somali Galbeed, Dalka Ethiopia.
Dagaalkan oo ay ku bara kaceen dhammaan dadkii degaanka Salaxaad iyo Laghida, waxaana ku dhintay sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya goobta dagaalka dad ku dhow 200 qof, dhaawacuna intaa ka badan.
Dagaalkan ayaa waxaa uu u dhaxeeyaa beelaha wada dega aaggaas, wuxuuna bilowday ka dib markii geel laga qaaday midka mid ah beelaha halkaas ku dagaalamayo. Wararkaloo aanu ka soo xiganay dad xog'ogaal ah ayaa sheegaya in dagaalku yahay mid siyaasadeed oo ay labada qolo isku hayaan dhul deegaaneed.
Dagaaladan ayaa daba socda kuwo marar hore ka dhacay goobtaas. Dadka deegaanka deggan ayaa sheegaya in ay dagaaladan yihiin kuwo ay dabada ka hurinayso dowladda Itoobiya oo waayahan danbe ku hawloon qeybi oo xukun. Dhowaan waxaa lagu gubay baabuur badan oo laga lahaa Gobollada waqooyi ee Soomaaliya iyadoo darawaladii baabuurtaasi waday sheegayaan in la gubay waxii saarnaa.
Colaadan ayaa ku soo beegantay xilli ay ciidamada Itoobiya ku sii hub urursanayaan si ay ugu duulaan dalka Soomaaliya, iyadoo ay ugu tala galeen in dadka ku hoosnool gumeysiga Itoobiya ay dhexdooda isku mashquulaan inta ay ciidamada ku hawlloonyihiin weerarka dalka Soomaaliya.